Habibiana nahatsiravina : Sivy mianaka may nodoran’ny dahalo | NewsMada
Par Taratra sur 23/02/2021
“ Lonilony noho ny resaka ady tany”. Izay, araka ny voalaza, no nitarika ity vonoan’olona mahatsiravina, nitranga tao amin’ny fkt Vohimary, kaominina ambanivohitra Mahasoa, distrikan’i Betroka, afakomaly ity. Sivy mianaka no indray maty, kilan’ny afo nodoran’ny dahalo tamin’izany.
Tokantrano iray, misy ankohonana sivy mianaka no indray nodoran’ny dahalo velona tao Benonoky, Fokontany Vohimary, Kaominina Ambanivohitra Mahasoa, distrikan’ny Betroka, afakomaly, tokony ho tamin’ny folo ora alina. Nasain’ireo olon-dratsy nivoaka ny trano ilay raim-pianakaviana hamoaka ny omby, saingy tsy nivoaka. “Lonilony teo amin’ny resaka ady tany no nahatonga ny habibiana. Tafo bozaka moa ny trano ka nodoran’ireo dahalo ireo tao avokoa izy sivy mianaka. ”, hoy ny kaomandà ny vondron-tobim-pileovan’ny zandary ao amin’ny faritry Anosy, ny Lietnà Andrisoa. Ankoatra azy sivy mianaka may dia tapitra kilan’ny afo tao koa ny ondry aman’osin’izy ireo. Tetsy an-kilany, lasan’ireo dahalo ny omby niisa roa an’io fianakaviana voaroba io ary vaky nadositra izy ireo.
Olona roa voasambotra…
Fotoana vitsy taorian’ny nahazoan’ny mpitandro filaminana ny vaovao, nidina nijery ifotony ny zava-nisy avy hatrany izy ireo. Natao ny fikarohana ka olona roa tsy lavitra ny tanàna no voasambotra. Ireo olona ireo, izay ahina ho tompon’antoka tamin’izao fandorana olona velona izao. Ankotra izay, an-dalam-pikarohana ireo dahalo naman’ireo roa voasambotra ireo ny CMS avy ao Betroka sy ny zandary ao an-toerana. Nanamafy ny solontenan’izy ireo fa tsy handefitra velively amin’ny asa ratsy tsy azo ivalozana tahak’izao ary hampiatra ny sazy enjana ho an’izay nanao izany. Tsiahivina fa tsy vao sambany no nisiana fandorana trano tahaka izao tany an-teorana.